10 Talooyin oo Muhiim u ah Suuqgeyaasha Ciyaaraha ah | Martech Zone
Talaado, Janaayo 17, 2017 Jimco, Oktoobar 2, 2020 Lexie Lu
Marka waxaad diyaar u tahay inaad ilkahaaga ka goyso adduunyada xawaaraha badan, xiisaha badan ee suuqgeynta. Is-dhiirigelintu shaki la’aan waa muhiim, laakiin sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad soo dhaweyso talada waqtiga la tijaabiyay oo aad fahanto sida loogu dabaqo howlahaaga iyo jawigaaga shaqo. Sii wad akhriska sagaal tilmaame oo muhiim ah kuwaas oo kaa caawin doona inaad ogaato, kobocdo oo aad baraarto inta aad ku jirto warshadaha suuqgeynta.
Noqo qof wax baara - Markasta isku day inaad fiiriso xaaladaha, teknolojiyada, iyo isbeddellada iyadoo ujeedadu tahay inaad soo bandhigto waxa aad ka soo xaabuli karto iyaga si aad ugu adeegsato shaqadaada suuq-geynta. Haddii aad leedahay maskax sax ah, wadahadal aan caadi aheyn oo lala yeesho saaxiibkaaga ugu fiican ayaa kicin kara fikrado cusub oo ku saabsan sida loo dhiirrigeliyo booqashada buugaagta macaamiishaada ugu dambeysay.
Ka Feejignaan Baaqiga Ka Baxsan - Adiga oo ah ganacsade laylis ah, kama lihidid da'da asaaggaaga. Xaqiiqadaas awgood, xiriirada iyo kheyraadka qaar ee laga yaabo inay heli karaan dad khibrad leh ayaa lagaa mamnuucayaa adiga waqtigaan xirfadaada. Si kastaba ha noqotee, ma jirto sabab loo niyad jebiyo. Ku boorri naftaada inaad ka fikirto banaanka sanduuqa, kana baxsan xeeladaha iyo farsamooyinka caadiga ah. Hantidaada ayaa wax ka tari karta macaamiisha isla markaana ka kasban karta facooda. Si aad caado ugu noqotid inaad ku fikirto siyaabo wax u dhimaya filashooyinka, had iyo jeer isweydii naftaada, “Ma jirtaa wax iga maqan?"Ama"Miyaan ku tagi karaa tan si ka duwan?
Shabakad Sida Pro - Maaddaama aad ku cusub tahay warshadaha suuqgeynta, waxaad u maleyneysaa inaad ugu yaraan wax yar ku yareynayso khibrad la’aanta la dareemayo, oo ay weheliso aqoonta ay dadku weli aqoon kuu lahayn. Si kastaba ha noqotee, wali waad tusi kartaa kuwa kale inaad diyaar u tahay inaad ku fiicnaato barashada sida loo noqdo xiriiriye heer sare ah.
Mar kasta oo aad ku sugan tahay shir, la sheekeysiga asxaabtaada qadada ama aad ku fadhiisato tareenka inta lagu jiro safarkaaga, had iyo jeer diyaar u noqo inaad ka hadasho xirfaddaada. Tixgeli qof kasta oo aad la kulanto xulafad suurto gal ah oo xirfaddaada u qaadi karta heer kale. Kaararka ganacsiga gacanta ku hay oo samee ugu yaraan hal "hadal wiishka" aad isticmaali karto marka qof ku weydiiyo, "Marka, maxaad qabataa?" Ku dadaal inaad ku dhaqanto dhaqankaaga ugu fiican waqti kasta, sidoo kale.
Dareenka aad sameyso waxay sababi karaan dadka ku nool deegaankaaga inay xiiseeyaan inay si fiican kuu bartaan oo ay sameeyaan waxa ay karaan si ay ugu horumariyaan xirfaddaada, laakiin sidoo kale waxay yeelan karaan saameyn taas ka duwan.
Xakamee Farriimahaaga - Inaad wax qanciso ma sahlana sida la moodo, maxaa yeelay waxaa jira cunsurro aadan xakamayn karin. Waad ku maamuli kartaa qaybo ka mid ah farriimaha aad gudbiso adoo adeegsanaya ereyo sasabasho leh, sheekooyin la soo celin karo, iyo tusaalooyin qosol leh, laakiin maskaxda dadka ayaa sidoo kale qaadata macluumaadka ay maqlaan oo dib ugu xira wixii hore ee ay soo mareen Adigu ma xakamayn kartid dhinacaas, laakiin waxaad awood u yeelan kartaa sida farriinta loo arko.
Hal dariiqo oo taas loo sameeyo waa iyada oo la adeegsado muraayad, farsamo halkaas oo ku hadlaku ku dayanayo luqadda jirka oo lagu arkay dhagaystaha. Mirroring wuxuu caawiyaa dhisida isfahamka wuxuuna dadka ka dhigayaa mid aad ugu raaxeysanaya joogitaankaaga, taasoo u horseedeysa inay noqdaan kuwa maskax furan oo ku saabsan waxaad sheegaysid. Sida laga soo xigtay daraasadaha qaarkood, iibku wuxuu ka kordhay 12.5 ilaa 66 boqolkiiba marka farsamooyinka muraayadda la hirgeliyo.
Isbarasho Qiyaasta Suuqgeynta - Waxaa jira habab fududaan oo lagu ogaan karo haddii xeeladaha suuqgeyntaadu u shaqeynayaan sidii loogu talagalay. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah macaamiishaadu uu yahay xiddig hore oo muusig ah oo dib ugu soo laabanaya warshadaha madadaalada ka dib 10 sano oo hakad ah. Waxaad dhahdaa waxaad dareentay darajooyinkeeda Boodhku inay si dhakhso leh usii dardar geliyaan usbuuca kadib markaad ku socodsiiso xayeysiis bog buuxa ah joornaalada waaweyn oo aad bilowdo olole Youtube u heellan Waxaa macquul ah fursad wanaagsan waxyaabaha aad sameysay si aad ugu xayeysiiso sii deynta waxay keeneen waxqabadka shaxda oo la hagaajiyay.
Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood, waxaad u baahan doontaa inaad ku tiirsan mitirro aan caddayn si loo ogaado in waxa aad sameyneyso ay waxtar leeyihiin, ama haddii ay lagama maarmaan tahay in wax laga beddelo. Xogta ku saabsan booqashooyinka websaydhka, ka soo qaybgalka riwaayadaha, xiisaha loo qabo farshaxanka kanaalka warbaahinta bulshada iyo xitaa soo dejinta ringtone ayaa dhammaantood sheegi kara sheekooyinka habka suuqgeynta u qalmitaanka.
Isha Ku Hay Hormarka Warshadaha - Waxaad horay u baratay sida ay muhiimka u tahay inaad yeelato maskax wax weydisa oo aad ogaato in ku dhowaad isdhexgal kasta uu kicin karo fikradaha wanaagsan ee xirfaddaada suuqgeynta. Sidoo kale, si adag u shaqee si aad ugu sii socotid horumarka warshadaha. Joornaalada ganacsiga, websaydhada, iyo baloogyada ayaa bixiya aragti wanaagsan oo kaa caawin karta inaad wax ka barato habab cusub oo wax ku ool ah ka hor intaanay noqon kuwa guud. Kusoo qor qoraalkan Martech oo dhagayso Douglas Karr's Martech Zone Wareysiyada Podcast! Ma awoodi doontid inaad fahanto maqaal kasta, laakiin waqti kadib waxaad kordhin doontaa aqoontaada si aad ah.
Qaado Waxyi ka yimaada Dadka Sharaf leh - Markaad ka shaqeysid safkaaga suuqgeynta suuqyada, is-hoosaysii oo had iyo jeer naftaada u muuji asalka dadka aad ka heshay Shakhsiyaadkaasi xitaa kuma jiraan warshadaha suuqgeynta, laakiin wali waxay ku bari karaan mabaadi'da faa'iidada u leh gaaritaanka himilooyinkaaga. Haddii dadka ku dhiirrigeliyaa ay caan yihiin, tixgeli inaad soo dejiso podcasts, akhriska taariikh nololeedyo, ama daawashada wareysiyada Youtube si aad u hesho faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan sida maskaxdoodu u shaqeyso.
Baadh Teknolojiyada Suuqgeynta Suuqgeynta - Sida ay qabaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha warshadaha, aqoonta is-gaarsiinta suuqgeynta waa xirfad dalbasho kaa caawin karta inaad horay u sii socoto intaad dhex mushaaxayso dhul had iyo jeer is beddelaya. Ka sokow inaad aqoon u leedahay mowduuc sii kordhaya, waxaad ku fiicnaan kartaa waajibaadka maalin kasta. Otomaatiga suuqgeyntu wuxuu sahlayaa faafinta erayga, soo saarida tilmaamaha, iyo la xiriirida macaamiisha, iyada oo aan luminin waqti loo baahdo.
Muuji dulqaad - Degdeggaaga si aad horumar u sameyso oo aad natiijo ugu hesho liiska macmiilkaaga, waxaa laga yaabaa inaad samirto, gaar ahaan haddii ay u muuqato in farsamooyinka cusub ee la hirgaliyay aysan shaqeyneyn. Sida ay u adagtahay mararka qaarkood, yeelo dabeecad adkaysi leh. Suurtagal maaha inaad aragto guulo waaweyn oo habeennimo ah. Sabirku waa lama huraan, qaasatan kahor inta aan lagu kaydin xogta si loo ogaado bal in tuhunkaagu run yahay.
Ku Biir Bulshooyinka Suuqgeynta - Suuqgeynta casriga ahi inta badan waxay ku tiirsan tahay teknolojiyadda si wax ku ool ah loo hawlgaliyo loona cabbiro istiraatiijiyado leh ilo kooban. Qalabka ayaa halkan u jooga in lagu caawiyo waxaadna baran kartaa hal tan oo kaliya aad weydiineyso su'aalaha khubarada beesheena. Hubso inaad ku biirto bulshooyinka suuqgeynta inta lagu jiro warbaahinta bulshada - gaar ahaan kuwa ka hadlaya suuqgeynta gudaha warshadahaaga. Ma fahmi doontid wadahadal kasta - laakiin waxaad soo qaadan doontaa talooyin waaweyn oo kaa caawin doona inaad ku ballaadhiso aqoontaada waqtiga.
Soodhawayn, Suuq Cusub!
Waxaan rajeyneynaa, in tobankan tilmaamood kaa caawinayaan inaad dareento kalsooni badan sidii suuq cusub. Xusuusnow, xitaa markii aad ka gudubto xirfadle suuq-geyn ah oo aad u wareejiso khabiir la xaqiijin karo, had iyo jeer wax badan ayaa laga baran karaa.
Tags: sida suuq loo noqdowarshadahabaro suuqgeyntamarketingwarshadaha suuq geyntahalgankanetworkIsgaadhsiintasuuqleyda cusubsuuqgeyaal cusubsuuq geyn laylis
Lexie Lu waa naqshadeeye UX oo madaxbanaan iyo blogger. Waxay la socotaa websaydhkii ugu dambeeyay iyo naqshadaha UX oo had iyo jeer waxay haysataa koob u dhow. Waxay wax ku qortaa Naqshadeynta Naqshadeynta waxaana lagula socon karaa barta Twitter-ka @xDayaannax.